Tattoo-ka faraha gacmaha: 5 shay oo laga fiirsado | Tattoo
Tattoo faraha: 5 shay oo maskaxda lagu hayo
Antonio Fdez | | Tattoos, Tattoos
Ma waxaad u maleyneysaa inaad farahaaga sawireyso? Ma aha markii ugu horreysay ee Tattoo waxaan ka hadalnaa shaatiga farta. Nooc ka mid ah tattoo-yada oo adeegu badanaa ku tilmaamo "xad-dhaaf" (haddii aan ka fogaanno wadnaha durba baahsan ama erayga ku jira astaanta mid ka mid ah faraha). Waana in nooc kasta oo tattoo ah oo ku yaal faraha gacmaha uu muuqan doono haa ama haa sanadka oo dhan. Iyo, haddii aanaan u adeegsan qurxiyo, ma jirto hab lagu qariyo.
Waqtigaan oo kale sanadkii waa sahlan tahay in lala kulmo dad leh sawir gacmeed. Waxaa intaa dheer, server wuxuu leeyahay saaxiibo markii ugu horeysay ee mid mid lagu dhejiyo mid ka mid ah faraha gacantiisa. Ma hab fiican baa in laga bilaabo adduunka ka mid ah shaatiga? Qayb ahaan haa, inkasta oo ay sidoo kale yeelan karto dhibco xun. Taasi waa sababta aan u ururino 5 shay oo ay tahay in maanka lagu hayo taatikada farta. Haddii aad ka fekereyso inaad sawirto mid ama dhowr farood, maqaalkani wuu xiiseynayaa.
1 Way muuqdaan sanadka oo dhan
2 Waxay si fudud u dhacaan
3 Meel la yareeyay oo lagu sawiro
4 Waa mid ka mid ah aagagga jirka ee ay aadka ugu xanuunsato in lagu sawiro
5 Waxay saameyn ku yeelan kartaa noloshaada shaqada
Way muuqdaan sanadka oo dhan
Waa wax aan hore uga soo hadalnay. Tattoo farta ayaa la arki karaa sanadka oo dhan. Haddii uusan tattooku aad u yareyn oo uu ku jiro astaanta mid ka mid ah faraha gacanta, waxay noqon doontaa wax aan macquul aheyn in la qariyo. Iyo haa, haddii aan rabno inaan daboolno, waxaan u baahanahay inaan u adeegsanno qurxiyo gaar ah si aan u awoodno inaan u daboolno. Taasi waa sababta ay tahay inaad fikir badan ka siiso fikradda ah inaad nooc ka mid ah tattoo ku hesho faraha gacmaha.
Waxay si fudud u dhacaan
Maqaarka gacmuhu waa midka ugu badan ee soo gaadha dhammaan noocyada wakiilada dibadda ee saamaynta ku leh geeddi-socodka gabowga. Hadday tahay shaqo ama sababo kaleba, maqaarka gacmuhu wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah si uu ugu ekaado mid siman oo da 'yar. Sidaa darteed, tattoo-yada lagu sameeyay qaybtan jidhkeenna sidoo kale waxay la il-daran yihiin dhibaatooyinkan. Khibradeyda shaqsiyadeed ka dib, waxaan xoojin karaa taas Tattoo farta waxay u baahan doontaa dib u shaqeyn xilliyeed dhawrkii sanaba mar Sababtoo ah si kasta oo aad uga taxaddarto, waxay si dhaqso leh u lumin doonaan midabka.
Meel la yareeyay oo lagu sawiro
Sida iska cad, faraha gacmuhu waa mid ka mid ah meelaha jirkeena ee bixiya meel yar oo lagu sawiro. Sababtaas awgeed Waxaan ku xaddidanahay xaqiiqda ah inaan awoodno oo keliya Tattoo yar. Waxaan caadi ahaan arki karnaa warqad lagu calaamadeeyay far kasta oo gacanta ah si loo sameeyo erey ama astaamo yaryar ama walxo sida barroosinka dheeman hillaac, iyo kuwo kale. Haddii aadan hubin qaadashada tattoo yar, waxaa ugu wanaagsan inaad tixgeliso astaantida aag kale oo jirkaaga ah.
Waa mid ka mid ah aagagga jirka ee ay aadka ugu xanuunsato in lagu sawiro
In kasta oo ay tahay in la sameeyo tattoo, xaqiiqda xanuunka waa inaysan noqon qodob go'aaminaya go'aan qaadashada, waa inaad ogaataa taas faraha ayaa ka mid ah meelaha ugu xanuun badan ee lagu sawiro. Si kastaba ha noqotee, iyo sida tattoos-ka lagu sameeyay qayb ka mid ah jirka badanaa way yar yihiin, waa xanuun si fiican loo xamili karo.
Waxay saameyn ku yeelan kartaa noloshaada shaqada
Waa wax laga xishoodo, laakiin maanta, xirfado badan xaqiiqda haysashada tattoo muuqda sida faraha saamayn ku yeelan kara u qalmidda shaqooyinka qaarkood. In kastoo haddii kaliya aan ku sawirno tattoo yar oo ka mid ah faraha oo si fudud loo qarin karo, waa in aynaan dhibaatooyin la kulmin, waa qodob kale oo xisaabta lagu darey in lagugu sawiro faraha hal gacan waa go'aan muhiim ah sida haddii aan ku qabaneyno qoorta, tusaale ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Tattoo faraha: 5 shay oo maskaxda lagu hayo
Soo saar waxa aad gudaha ku haysato oo leh tattoos anatomical ah
Tattoo-ka loo yaqaan 'Rose tattoos' ee haweenka